သင် ဒါတွေ ကို သိပြီးပြီလား ?
ရန်ကုန်မြို့မှာ ၁၈၂၆ မတိုင်မီ...
မြန်မာဘုရင်တွေ ခေတ်တုန်း က ၁၈၂၆ မတိုင်ခင်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိပါဘူး
ဆူးလေဗလီ မပြောနဲ့ ... ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာ ဗလီ တစ်လုံး မှ မရှိခဲ့ဘူး။
သက်သေ အခိုင် အမာ wikipedia က ပြောတာ။ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
ဆူးလေစေတီတော်ကြီးရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုရားမြေ၊ သာသနာ့မြေ နေရာကို ယူပြီး ကိုလိုနီခေတ် ကာလမှာ Islamize လုပ်ပြီး ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ဗလီကြီး က တော့ မြန်မာတွေရင်ထဲကို ထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့ ဆူးတစ်ချောင်းပါပဲ။
ဒီလို ပြောတာဟာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဟာ Islamization အတွက် အဖြေ မဟုတ်ပါဘူး။
နှောင်းလူ၊ အနာဂတ်မြန်မာတွေက ဆူးလေဗလီ ဆိုတာ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တာလို့ ထင်နေမှာစိုးလို့သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ပြတာပါ။
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းသိအောင် သမိုင်းကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းဖေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရပါဘူး။
အရှေ့ဥရောပတိုက်ရဲ့ အကြီးဆုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Constantinople မြိ်ု့ က Hagia Sofia ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကြီးကို ရဲ့ ခရစ်ယာန်သင်္ကေတတွေအားလုံး ကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီး ယုတ်မာပက်စက်စွာ ဗလီအဖြစ်ပြောင်း လုပ်ခဲ့တာနဲ့Hagia Sofia ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရပါဘူး။
အော် ..ငါတို့ ဆူးလေစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာ တစ်ချိန်တုန်းက ဒီလိုပါလား ဆိုတာ သိအောင်လို့ ပါ။
ဘင်္ဂါလီ ဆွန်နီ ဂျာမခ် ဗလီ Bengali Sunni Jameh Mosque ဟာ ဆူးလေစေတီတော်ကြီးရဲ့ မုခ်၊ ပြသာဒ် ပရ၀ဏ်၊ ဂေါပကမြေ၊ ဘုရားမြေ သာသနာ့မြေနေရာကို ယူပြီး ကိုလိုနီခေတ် ကာလမှာ Islamize လုပ်ပြီး ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ဗလီကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ငါတို့ခေတ်မှာ ဆူးလေစေတီတော်ကြီးရဲ့ တန်ဆောင်းပြသာဒ်နေရာတွေ မှာ ဗလီကြီးတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ Islamize ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
နောင် ငါတို့ သားမြေးတွေ ခေတ်မှာ ဆူးလေစေတီတော်မြတ်ကြီး ဟာ ရှိရော ရှိပါတော့ အုန်းမလား။ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ကလေး တစ်ချက်လောက် ၀င်သွားဖို့ ပါပဲ။
ငါတို့ ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုရားမြေမှာ မို့ လို့ ဗလီကို ရွှေ့ပေးပါ။ တခြားနေရာ မှာ ဗလီဆောက်ဖို့ မြေအကျယ်ကြီး ပေးပါမယ်လို့ ပြောရင် မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်လို Taqiyya ( Deceit ) ပြန်ပြောမယ်ထင်သလဲ။
ဒါပေမယ့်မရပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူးတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ မြို့ ဂျေရုဆလင်၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ Ayodhya မြို့ တွေမှာ သူများဘာသာတွေရဲ့ ဘာသာရေး အထွတ်အမြတ်နေရာတွေHoly Place တွေမှာ သူများဘာသာတွေကို နာမ်နှိမ်ပြီး တမင်သက်သက် ဗလီကြီးတွေ ဟီးနေအောင်ဆောက်တတ်ပါတယ်။
ကုရန်အာန်ကျမ်းတစ်ခု တည်းက သူများဘာသာခြားနေရာတွေကို နာမ်နှိမ်ထားရမယ်။ ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။
ဒါတွေဟာ တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ။ ဘာအတွက် မဖယ်ပေးနိုင်တာလဲ။ ဆူးလေဗလီကို ။ မိုဟာမက်မွေးခဲ့တဲ့နေရာမို့ လို့ လား။ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဘာသာရေးသမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ နေရာမို့ လို့ လား။
ဘာအတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထွတ်မြတ်ဆုံး သာသနာ့မြေ Holy Place မို့ လို့ ကို တမင်သက်သက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်သက်လုံးနာလံမထူနိုင်အောင် ဗလီကြီးဆောက် ပြီး နာမ်နှိမ်ထားတာ။ တသက်လုံး မဖယ်ပေးဘူး။ ရှင်းပါတယ်နော်။
အဲဒီအနာဂတ် မြန်မာလူငယ်လေးတွေဟာ " အော် ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ ငါတို့ ဘိုးဘွားမြန်မာတွေ ခေတ် က ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် ၆သန်းကို မြန်မာလူမျိုး အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့တာကိုး။ ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် ၆သန်းနဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်ရောက်နှင့်ပြီးသား မွတ်ဆလင် ၆သန်း စုစုပေါင်း ၁၂သန်း ကနေပြီး အခု မြန်မာပြည်မှာ မွတ်ဆလင် သန်း၆၀လောက်ဖြစ်သွားတာ ငါတို့ခုမြန်မာလူနည်းစုတွေ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ရှေးခေတ် ၂၀×× ခုနှစ် က မြန်မာတွေ သောက်တလွဲလုပ်ခဲ့တာကိုး " လို့ မချိတင်ကဲ မြည်တမ်းနေမှာ ကို ကာကွယ်ပေးကြပါ။
ရန်ကုန်မြို့ က ရာနဲ့ချီ ဆောက်ထားတဲ့ ဗလီတွေဆို တာ
၁၈၂၄ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲပြီးမှာ သာ မွတ်ဆလင်တွေ ရန်ကုန်မှာ ဗလီ ဆောက် ရဲ တာ ပါ ( နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ( မြန်မာတွေ ၀ါးအစည်းပြေနေချိန်မှာ မွတ်ဆလင်တွေ ဗလီတွေ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး ဆောက်လိုက်ကြတာ အခုတော့ ဗလီတွေ ရာချီနေပြီ )
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကနေစပြီး ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ တက်သုတ်ရိုက်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါပြီ။
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ တည်တံ့လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ဟာ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီပြီ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိတဲ့ မြို့....
ရန်ကုန်မြို့ကြီး ဟာ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိတဲ့ ဗလီ ကင်းမဲ့တဲ့ မြို့ အဖြစ် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ ရပ်တည်လာခဲ့တာပါ။
နောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၁၉၀ လောက်အတွင်းမှာ မှ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ ရာနဲ့ချီ ပြီ ဗလီတွေ ကို ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့ အပြားမှာ ဆောက်ထားပါတာပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် မြန်မာတွေ သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကို သိပြီပေါ့၊
မွတ်ဆလင်တွေ လိမ်ချင်တိုင်းလိမ်လို့ မရတော့ပါဘူး။
wikipedia ရှိနေပြီလေ ။
ဘုရင့်နောင်ခေတ် ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိခဲ့ဘူး ။
(မွတ်ဆလင်မရှိဘူးလို့ မပြောဘူးနော်၊ လူနည်းစု မွတ်ဆလင်တွေကို လွတ်လပ်စွာ practise လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်၊ သို့သော် လွတ်လပ်စွာ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းခွင့် လုံးဝ မပေးခဲ့ဘူး )
အလောင်းဘုရားခေတ် ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိခဲ့ဘူး ။
၁၈၂၆ မတိုင်ခင်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိပါဘူး
နောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၁၉၀ လောက်အတွင်းမှာ မှ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး
အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ ရာနဲ့ချီ ပြီး ဗလီတွေ ကို ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့ အပြားမှာ ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာ အခိုင်အမာ သက်သေတွေနဲ့သိပြီပေါ့
ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေ ခေတ် မြန်မာတွေ စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့တုန်းက မွတ်တွေ အီးတောင် မပေါက်ရဲဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှတောင် ဗလီတစ်လုံးမှ မဆောက်ရဲခဲ့ဘူး။
မင်းတုန်မင်းခေတ်က စလို့ ခုချိန်ထိ မြန်မာတွေ အချင်းချင်း သတ်နေကြလို့သာ၊
မြန်မာတွေ ၀ါးအစည်းပြေတာ ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မွတ်ဆလင်တွေ
( ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်း ပြီး )ရန်ကုန်မြို့မှာ ဗလီရာချီ
( နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း တက်သုတ်ရိုက်ပြီး ) ဆောက်ပြီးသွားပြီ။
ဒါတွေကို ဘယ်သူတွေ ပြောခဲ့သလဲ၊ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။
ဒီလိုပဲ သမိုင်းကို ရှာရဖွေရတာပါပဲ။
ဒီအချက်တွေ ဟာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ သက်သေအထောက်အထား အချက်အလက်တွေပါ
နယူးယော့ခ်မြို့ မှ လည်း ၁၉၁၅ မတိုင်မီက ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိခဲ့သလို
အင်္ဂလန်မှာလည်း ၁၈၈၉ မတိုင်ခင် က ဗလီ တစ်လုံးမှ မရှိခဲ့ ပဲ
အခုအချိန်မှာ အင်္ဂလန်မှာ ဗလီ အလုံးပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်ရှိနေသည်ကို ကြည့်လျှင်
မွတ်ဆလင်တွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး ဗလီဆောက်၊ မွတ်ဆလင်လူဖေါက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းနေတဲ့ speed ကို မြင်နိုင်ပါတယ်
မြန်မာတွေ အချင်းချင်း သတ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ......
မွတ်ဆလင်တွေ ဘာတွေကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်နေခဲ့ကြသလဲ??
အခိုင်အမာသက်သေတွေ ကို ကြည့်ပါ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ဗလီ ၂၇၀၀၊
မြန်မာ့ အခက်၊ မွတ်ဆလင်အချက် မဖြစ်ပါစေနဲ့၊
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်နိုင်ငံတွေကို မွတ်ဆလင်တွေ လက်မှ အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပေးကြပါ။
နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော် အိန္ဒိယမှာ နေလို လ လို ထွန်းကားခဲ့ တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ လည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးပြီ
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီး အဖြစ် တည်တံ့ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလည်း အစ္စလာမ်ဇာတ် သွင်းခံခဲ့ရပြီး မူလ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူဦးရေ ၀.၈% ( ၁%တောင် မရှိတော့ ) တဲ့ အထိ အဗျင်းခံထားခဲ့ရပြီးပြီ
မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန် ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးတွေလည်း စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး အစ္စလာမ်ဇာတ် သွင်းခံခဲ့ရပြီးပြီ။
အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ က ရဟန်းသံဃာတွေကို လည် လှီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ချေမှုန်း ပြီး အစ္စလာမ် နိုင်ငံ အဖြစ် သို့ သွတ်သွင်းလာခဲ့သော မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်တွေဟာ
အခုဆိုရင် အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ ကို တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံ ချေမှုန်းပြီး ……
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်နိုင်ငံတွေကို ချေမှုန်းသိမ်းပိုက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်အောင် အပြီးတိုင် ချေမှုန်းဖို့ တာဆူနေကြပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချက်အချာနေရာတွေ အားလုံးမှာ လည်း ဗလီတွေ ၂၇၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးပြီ၊
ရခိုင်သွေးချင်းတွေကို လည်း သတ်ဖြတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဇာတ် သွင်းဖို့လုပ်နေပြီ။
ဘူသီးတောင် မောင်တော မူဆလင် ၉၆%၊ မြန်မာ ၄% ကုန်သလောက် ဖြစ်သွားပြီ
မူဆလင် ၉၆ယောက်၊ မြန်မာ ၄ယောက်
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရဲ့ အချက်အချာနေရာတွေ အားလုံးမှာ လည်း ဗလီတွေ ၃၄၉၄ ( ၃၅၀၀ နီးပါး) ဆောက်ပြီးသွားပြီ။
ထိုင်းတောင်ပိုင်းလည်း ပါသွားပြီ။ ဗလီတွေ ပြွတ်ခဲပြီး မူဆလင် နယ်မြေဖြစ်သွားပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရဲ့ အချက်အချာနေရာတွေ အားလုံးမှာ လည်း ဗလီပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးသွားပြီ။
( နိုင်ငံသေးသေးလေးနဲ့ ဗလီ အရေအတွက် က ကြောက်စရာ ၊
တစ်ခု ချင်းဆို မသိသာပေမယ့်
အားလုံးသော အချက်အလက်တွေ ကို စုစည်း ဆက်စပ်မိတဲ့ အခါမှာတော့
မူဆလင်တွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ပေါ်လာတော့တာ ပါပဲ။ )
သီရိလင်္ကာ မှ လည်း မူဆလင် လူဦးရေ အချိုးအစား ( ၁၀% ) ဖြစ်လာနေပြီ။
သီရိလင်္ကာ ၁၀ယောက်မှာ မူဆလင် ၁ ယောက် နှုန်းဖြစ်နေပြီ
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်နိုင်ငံတွေကို တစ်လက်မ မှ အထိမခံပါနဲ့တော့။
ဒီခံတပ်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်တွေပါပဲ၊
ဒီခံတပ်တွေ ကျဆုံးသွားရင် ဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး။
ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာ စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်နိုင်ငံတွေ ကို မွတ်ဆလင်တွေ လက်မှ အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပေးကြပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံတွေ ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်
ဤ ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ အပြီးတိုင်အောင် ပျောက်ကွယ် သွား ပြီ လို့ဆိုနိုင် ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံ တွေ ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ်သွားအောင် မွတ်ဆလင်တွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဤ ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ အပြီးတိုင်အောင် ပျောက်ကွယ် သွား ပြီ လို့ဆိုနိုင် ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံ တွေ ကို သာ
အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ် အောင်လုပ် နိုင် ရင် ၊
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှာ အပြီး တိုင် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆို နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်နိုင်ငံတွေကို ချေမှုန်းသိမ်းပိုက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်အောင် အပြီးတိုင် ချေမှုန်းဖို့ မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်တွေ တာဆူနေကြပါပြီ။
မွတ်ဆလင်တွေ ရက်စက်ယုတ်မာစွာ ချေမှုန်းခဲ့လို့ တစ်နိုင်ငံပြီးတစ်နိုင်ငံကွယ်ပျောက်သွားခဲ့တဲ့
ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့နောက်ဆုံးသောခံတပ် တွေ ကို အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပေးကြပါ
ကျနော်တို့ဟာ မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်တဲ့ တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
မူဆလင်တွေ ဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်တည်ရှိခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းခဲ့၊
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေ ၊ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့
မူလအင်ဒိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို နိုင်ငံ့လူဦးရေရဲ့ ၀.၈% ပဲကျန်တော့ တဲ့အထိ ဗျင်းထားရုံတင် အားမရဘူး။
အခု နောက်ဆုံး ( မူလအင်ဒိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီကြီးသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ) ရှေးဟောင်း စေတီ အဟောင်း အပျက်ကြီးသဖွယ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ Borobudur စေတီကြီးကို ပါဖျက်ဆီးဖို့ ကြံနေပါပြီ။
အရင်တစ်ခါလည်း Borobudur စေတီကြီးကို မူဆလင်တွေ ဗုံးတက်ခွဲခဲ့ပြီးပါပြီ။
မူဆလင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံက မူလဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရုံတင် အားမရသေးပါဘူး။
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် Buddhas_of_Bamiyan ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ပါ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းဖျက်ဆီးခဲ့ တဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ ဦးဏှောက်ထဲကို ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်တွေပါ။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိခဲ့ မယ် ထင်ပါသလဲ။
အင်ဒိုနီးရှား က ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေ ဟာ ပုဂံ၊ မြောက်ဦးတို့ က စေတီပုထိုးတွေ ထက် တော့ လျှော့နည်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အခု တွေ့ရှိရတဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် စေတီတော်ကြီးကို တွေ့ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအင်ဒိုလူမျိုးတွေတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေ အခု ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။
အင်ဒိုနီးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေ ဟာ အစအနလေးတွေ တောင် မကျန်တော့ အောင် ဘယ်လို ဘယ်ပုံပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြတာလဲ။
ဒါမှ မဟုတ် မူဆလင်တွေ က သူများဘာသာတရားကို ချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလွန်းပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြလို့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေ ပျောက်ကွယ်ကုန်တာလား။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ - Borobudur စေတီကြီး
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ - Buddhas_of_Bamiyan ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်
မြန်မာနိုင်ငံ - ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး
ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ဗုဒ္ဓ ဖွားမြင်ရာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသ တွင် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်း…..
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့ နာလန္ဒာ Nalanda Buddha University သံဃတက္ကသိုလ် ကြီး ဟာ ထိုခေတ်ထို အခါ က အာရှတိုက်ဧ။် အကြီးမား ဆုံး ဂုဏ်ယူဖွယ် တက္ကသိုလ် ကြီးဖြစ် ပါတယ်။
အိန္ဒိယ မှာ နေလို ၊ လလို ထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့အနှစ်သာရ အုတ်မြစ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့ နာလန္ဒာ Nalanda Buddha University သံဃ တက္ကသိုလ် ကြီး မှာ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် က ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊တိဘက်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ပါရှား(အီရန်)၊ တူရကီ၊ မလေးရှား၊ထိုင်း၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စသည့်နိင်ငံများမှ
စာသင်သား ရဟန်းသံဃာများလာရောက် ကာ ဗုဒ္ဓ အမွေအနှစ် ကျမ်းဂန် ပညာ များကိုလေ့လာဆည်းပူးတဲ့ ၊
ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ သူတော်စင်တွေရဲ့သီတင်းသုံးပျော်မွေ့ ရာကမ္ဘာ ကျော် နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ ချီတည်တံ့လာ ခဲ့တဲ့ ထို နာလန္ဒာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တက္ကသိုလ် ကြီး ဟာ ၁၁၉၃ ခုနှစ်မှာ မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်တွေရဲ့ကျူးကျော်သတ်ဖြတ် ဖျက်ဆီးမီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၁၉၃ မှာတူရကီ မွတ်ဆလင်အစ္စလာမ်မစ် Bakhtiyar Khalji ဦးဆောင်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်စစ်တပ်ကြီး ဟာ အိန္ဒိယ ကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရင်း ၊
လူသတ်မုဒိန်းကျင့် တဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာနဲ့ဆန့် ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်( သူတပါးအသက်မသတ်ရ၊ သူတပါးသားပျိုသမီးပျို မဖျက်ဆီးရ၊ တစ်လင်တစ်မယား) ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ သာသနာ ကို အစ္စလာမ် ဘာသာ ရဲ့ 
ရန်သူ ( ထုံးစံအတိုင်း မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာဝင် အားလုံးကို သတ်ရမယ်ဆို တဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းချက်အရ ) ဆိုပြီး ရက်ရက်စက်စက်ချေမှုန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Bakhtiyar Khalji ဦးဆောင်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်အစ္စလာမ်မစ်စစ်တပ်ကြီး က နာလန္ဒာ ဗုဒ္ဓသံဃတက္ကသိုလ် ကြီး မှာ သူတို့ ရဲ့ အစ္စလာမ် ကုရ်အာန်ကျမ်းစာအုပ်ကို သင်ပြရမယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဟာ နာလန္ဒာ ဗုဒ္ဓသံဃတက္ကသိုလ် ကြီး မှာ သူတို့ ရဲ့ အစ္စလာမ် ကိုရမ် စာအုပ်ကို မထားနိုင်ဘူး လို့ ငြင်း ကာ ရဲ ၀ံ့စွာ ပဲ အသေခံ၊ အသက်တွေ စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ဂုဏ်ဆောင် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဧ။် အထွတ် အမြတ် နာလန္ဒာ ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ် ကြီး ဟာ မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ် တွေရဲ့ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရကာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ဟာ ဗုဒ္ဓ ဖွားမြင်ရာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသ မှာ အဆုံးတိုင် ဖျက်ဆီး ချေမှုန်းခြင်း Annihilatedအလုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဧ။် အထွတ် အမြတ် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်များကို မွတ်ဆလင်တွေ ကမီးတင်ရှို့ ရာ မှာ လပေါင်းများစွာ ကြာ တဲ့အကြောင်း၊
ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်များကို မွတ်ဆလင်တွေ ကမီးတင်ရှို့ ရာ မှ ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးလုံးတွေ ကြောင့် ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ဟာ မီးခိုးတွေနဲ့ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်သွားခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
အင်မတန်မှ နှမြောဖို့ ကောင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန် တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပဲ၊ မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက် ကို မှ ဒုက္ခ မပေး ပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း တရားဘာဝနာ အားထုတ်နေတဲ့ သိန်းနဲ့ ချီသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်း သံဃာ တွေဟာ ( ပြန်လည်ခုခံ တိုက်ခိုက်မှု မရှိ ပဲ) မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ 
အရှင်လတ်လတ် လည်လှီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်း၊ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော် ပေါင်း သိန်းနဲ့ ချီ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရ ကာ အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ပေါင်း ၁၀ သန်းကျော် ဟာ မွတ်ဆလင်တို့ ရဲ့ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သုတ်သင် ချေမှုန်း ခြင်း ကို ခံ ခဲ့ ရပါတယ်။
ထို အချိန် ကစလို့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ဗုဒ္ဓ ဖွားမြင်ရာ မူရင်းဒေသဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ မှာ မွတ်ဆလင်တို့ ရဲ့ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သုတ်သင် ချေမှုန်း ခြင်း ကို ခံ ရကာ အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။
နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော် အိန္ဒိယတွင် ခမ်းနားထည်ဝါစွာ တည်တံ့ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် မူဆလင်များဧ။် အမြစ်ပြတ်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသ တွင် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။
မွတ်ဆလင်တွေ က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပါဂစ္စတန်၊အာဖဂန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား တွေကိ်ု ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းပြီးပြီ။
ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန်တွေကို လည်း ဒီထက်မလျော့တဲ့ ရက်စက်မှုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ ရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြီ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားရာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအထွတ်အမြတ်ဒေသ ကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ ရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီး၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေကို မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်၊
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ကျမ်းဂန်တွေကို့ မွတ်ဆလင်တွေမီးတင်ရှို့ ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားရာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသ မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြီ
ဒါလည်း ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါစေတော့ ထားလိုက်တယ်။ မရဘူး။
အခုနောက်ဆုံး လက်ကျန် ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ကျန်တော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ၂ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း ချမ်းသာမပေးဘူး။
အမျိုးမျိုး မူဆလင်လူဖေါက်ဗလီဆောက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်း နေတယ်။
"ပို့ မဲ့ပို့ ..ကူးတို့ ရောက်အောင်ပို့ " ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွတ်ဆလင်တွေ ဖျက်ဆီးမဲ့ ဖျက်ဆီးတော့ အစ၊အန မကျန်အောင် ဖျက်ဆီးပေါ့၊ ဟုတ်လား။
အမျိုးမျိုး မူဆလင်လူဖေါက်ဗလီဆောက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းနေတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာ အနောက်ဖက် တံခါးက နေ ထိုးဖေါက်တယ်၊
ပြည်တွင်းမှာ ဗလီတွေ ထောင်ချီဆောက်တယ်၊
မွတ်ဆလင်သားဖေါက်တယ်။မွတ်ဆလင်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေ၊ ထိုင်းရေသောက်၊ ထိုင်းဆန်စားပြီး အိမ်ရှင်ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်တယ်။
မွတ်ဆလင်လူဖေါက်၊ မြို့ ရွာ ပြည်နယ်တွေမှာ ရသလောက် မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၉၀%ဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဒေသခံတွေ မနေရဲအောင်ဖြဲခြောက်၊
မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ၊ မြန်မာ့ရေသောက်၊ မြန်မာ့ဆန်စားပြီး အိမ်ရှင်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်တယ်
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကွယ်သွားမှ ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကျေနပ်မှာလား။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပါဂစ္စတန်၊အာဖဂန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ဖျက်ဆီးပြီး ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်း ပြီးပြီ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားရာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအထွတ်အမြတ်ဒေသ ကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ ရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးပြီးပြီ။
ဒါလည်း မွတ်ဆလင်တွေ အားမရသေးဘူးလား။
အခုနောက်ဆုံး လက်ကျန် ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ကျန်တော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ၂ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင် အဘက်ဘက် က အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပြီး အမျိုးမျိုး မူဆလင်လူဖေါက်ဗလီဆောက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းနေတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ကမ္ဘာပေါ်ကနေ အလုံးစုံဖျက်ဆီးပြီး အစအန မကျန်အောင် အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကွယ်သွားမှ ၊ ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကျေနပ်မှာလား။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ နဲ့ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူး၊ ဆစ်၊ စတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှ ဘာသာတွေ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး ကမ္ဘာပေါ်က လူသားအားလုံးဟာ အစ္စလမ်အလ္လာဟ်ကို ကိုးကွယ်မှ ခင်ဗျားတို့ဂျီဟတ် ကရပ်တန့် မှာလား။
ဒါတွေအားလုံးတစ်ခုမှ မမှားဘူး။ မိုဟာမက် လုပ်ခိုင်းတာမှန်သမျှဟာ အမှန်တရားပဲဆိုရင်တော့ မိုဟာမက်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာအလ္လာဟ် ဆီက လာတဲ့ ကမ္ဘာဖျက်မိစ္ဆာတမန်တော်မိုဟာမက်ပါပဲ။
တူရကီမှာ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်း ခဲ့ပြီးတဲ့အခါ မူဆလင် ၉၉% ရှိပြီး မူလ ခရစ်ယာန်တူရကီတွေဟာ ၁% တောင်မရှိတော့ပါဘူး။
၀.၈% သော မူလအင်ဒိုနီးရှားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ မထင်မရှား ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုး နဲ့ သင့်တော်ရာချောင်လေးတစ်နေရာမှာ dhimmis ဘ၀ဖြင့်သာ နေနေရတော့သည်။
ယခု ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမှ 4% ၄ရာခိုင်နှုန်းသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များသည် လည်း ၉၆% သော မူဆလင်များကို အန်တုမယှဉ်နိုင်သော ကြောင့် မထင်မရှား ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုး နဲ့ သင့်တော်ရာချောင်လေးတစ်နေရာမှာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့် dhimmis ဘ၀ဖြင့်သာ နေနေရသည်မှာ အင်ဒိုနီးရှား ပုံစံမျိုး မြန်မာပြည်တွင် စတင်နေပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို သက်သေပြနေပါပြီ။
ဒါထက်မက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဆောက်ထားပြီးတဲ့ ထောင်နဲ့ချီသော ဗလီများ ကလည်း သက်သေပြနေပါပြီ။
အစ္စလာမ် အယူဝါဒ စစ်ပွဲတွေမှာ စုတ်ပြတ်သတ်ပြီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ ရဲ့ နယ်မြေတစ်လက်မကို တောင် ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သလား။
မူဆလင်တွေရဲ့ နယ်မြေ တစ်လက်မ ကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပြန်ညလ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီလား။
မူဆလင်တွေရဲ့ နယ်မြေတစ်လက်မ ကိုတောင် ထိလို့ မရပဲ ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဟာ အစ္စလာမ် အယူဝါဒ စစ်ပွဲတွေမှာ အကြီးအကျယ် ကျဆုံးခဲ့ပြီး မူဆလင်တွေ တရစပ် သွပ်နေတဲ့ ဒဏ်ကို ပဲ စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် ခံနေကြရတယ်
အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ ပါကစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ က ရဟန်းသံဃာတွေကို လည် လှီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ချေမှုန်း ပြီး အစ္စလာမ် နိုင် ငံ အတွင်း သို့ သွတ်သွင်းလာခဲ့သော မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်တွေဟာ
အခုဆိုရင် အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ ကို တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံ ချေမှုန်းပြီး ……
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် (၂) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ ကို ခြိမ်းခြောက်လာနေပါပြီ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် (၂) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ်သွားအောင် မွတ်ဆလင်တွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဤ ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ အပြီးတိုင်အောင် ပျောက်ကွယ် သွား ပြီ လို့ဆိုနိုင် ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် (၂) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ် အောင်လုပ် နိုင် ရင် ၊
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှ အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ချေမှုန်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆို နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မွတ်ဆလင်တွေဖျက်ဆီးခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့ မြေပေါ်ကပျောက်ကွယ်တော့မဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် (၂) နိုင်ငံဆို တာ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ ။
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် (၂) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ် အောင်လုပ် နိုင် ရင် ၊ မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အပြီး တိုင် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆို နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော် တို့ ဟာ ဗုဒ္ဓ သာသနာရဲ့ နောက်ဆုံး သောခံတပ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ ။
ဒါတွေအားလုံက ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေပါ။ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာပြီး သင်ခန်းစာယူရပါမယ်။
နောက်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် ၊ သင်္ကေတမှန်သမျှ တစ်ခုမကျန် စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ ၊ ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ ဦးဏှောက်ထဲကို ရိုက်သွင်းထားတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းက ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေ အပေါ် ထားရှိတဲ့ အမုန်းတရားတွေကို မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဗလီပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့ပေါင်း စုစုပေါင်း ဘယ်နှစ်မြို့ရှိသလဲ။
အဲဒီ မြန်မာနိုင်ငံကမြို့တွေ အားလုံးထဲမှာ... " ဘယ်မြို့မှာ ဗလီရှိသလဲ " လို့ မေးလို့မရတော့ဘူး။
" ဘယ်မြို့မှာ ဗလီ မရှိသေးဘူးလဲ " လို့ သာမေးရတော့မယ်။
အခြေအနေက တော့ သိပ်မကောင်းဘူး။
သိသလောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကမြို့တွေ ထဲမှာ ဗလီမရှိတဲ့မြို့ဆိုလို့ တောင်ကုတ်နဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်း နှစ်မြို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကမြို့တွေ အားလုံးလိုလိုရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ အဓိကနေရာတွေမှာ ဗလီကြီးတွေ ဆောက်ပြီး အခိုင်အမာခြေကုတ်ယူပြီးနေပြီ။
ရန်သူ့နိုင်ငံတစ်ခု ကို သိမ်းပိုက်ချေမှုန်းဖို့ အချက်အချာကျတဲ့ မြို့ရွာပြည်နယ်၊ ဒေသတိုင်းမှာ အခြေစိုက် အမာခံစခန်းတွေ ထောင်နဲ့ချီဆောက်ထားတာလား။
နောက်ထပ်လည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အချက်အချာ ကျတဲ့နေရာတွေမှာ ဗလီတွေ အလုံး ၅ထောင်လောက်ဆောက်အုန်းမယ်၊
ပြီးရင် မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လူဦးရေနည်းပြီး တိမ်ကောသွားမယ်၊
မူဆလင်တွေက ကြိုတင် ( ပူးသတ်ဖို့ ) ယူထားတဲ့ မြန်မာမူဆလင်ဆိုတဲ့ နာမည်တုနဲ့ ၊
( မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာမူဆလင် လူမျိုး ဆိုတာ ရှိကို မရှိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဘင်္ဂလီလူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ )
နောက်ပိုင်း မြန်မာ=မူဆလင်ဆိုတဲ့ သဘောကို သွတ်သွင်းမယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံ = မြန်မာမူဆလင်နိုင်ငံ သဘောဖြစ်လာမယ်၊
မြန်မာမူဆလင်ပြည် ဖြစ်လာပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံက မူလဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးနဲ့၊ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အလုံးစုံစုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင်ချေမှုန်းအုန်းမယ်။
နောက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံက မူလဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အထိမ်းအမှတ် ၊ သင်္ကေတတွေဖြစ်တဲ့ ( ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ကျိုက်ထီရိုးဘုရား၊ ဆူးလေဘုရား) စသည်တို့ ကို လုံးဝလုံးဝ မမြင်ချင်ဘူးဆိုပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် ၊ သင်္ကေတမှန်သမျှ တစ်ခုမကျန် စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ဖျက်ဆီးအုန်းမှာပဲ။
Qur'an:8:7 ~"Allah wished to confirm the truth by His words: 'Wipe the infidels out to the last.'"
နိုင်ငံအသီးသီး၊ မြို့ရွာဒေသ၊ ပြည်နယ် စတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ရရင် ရသလို အစ္စလာမ်မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေ အားလုံးကို ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ရိုက်သွင်းထားတဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ ဦးဏှောက်၊ စိတ်ဓာတ်၊ အတွေးအခေါ်၊ ခံယူချက်တွေ ဟာ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေတာ ဘာမှ မဆန်းတော့ပါဘူး။
ဗလီဆိုတာ ရန်သူဘာသာခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ရှေ့တန်းအခြေစိုက်စခန်း Command Center ပါပဲ။
မူဆလင်တွေရဲ့ ဗလီတိုင်းဟာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒကို ခေါင်းထဲရိုက်ထည့်သွင်းရာနေရာ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ နေရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။
ဗလီဆိုတာ မူဆလင်တွေ အလ္လာဟ်အော်ရုံ သက်သက် ၊
မက်ကာကျောက်တုံးကို ကန်တော့ပူဇော်ရုံသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဗလီမှာ သောကြာနေ့တိုင်း မူဆလင်တွေဆုံတွေ့တယ်။
ရန်သူဘာသာခြားနိုင်ငံ၊ ရန်သူဘာသာခြားလူမျိုးတွေရဲ့ အခြေအနေတွေ တိုင်ပင်တယ်၊ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမဲ့ လမ်းစဉ်တွေ ချမှတ်မယ်။
မူဆလင် တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စိုးမိုးရမယ်ဆိုတဲ့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒတွေ ရိုက်ထည့်မယ်။
ရန်သူဘာသာခြားတွေကို ချေမှုန်းပစ်ဖို့၊ လိုအပ်ရင် ဗုံးခွဲနည်းသင်တန်းက အစ ဗလီမှာ ပေးမယ်။
ဗလီဆိုတာ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ရန်သူဘာသာခြားနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့ အတွက် မူဆလင်တွေရဲ့ အခြေစိုက် အမာခံ စခန်း Command Center ပါပဲ။
ဘယ်မြို့မှာ ဗလီ ဘယ်နှစ်လုံးဆောက်ပြီးပြီ။ ဘယ်နေရာမှာ ဗလီဆက်ဆောက်မယ်။ ငွေလိုတယ်။ အထက်ကို တင်ပြမယ်။
မူဆလင်တွေ အထက် က အထက်ကို တင်ပြပြီး နောက်ဆုံး မူဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီက မြန်မာနိုင်ငံကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့လိုအပ်မဲ့ ရန်ပုံငွေတွေ ချပေးမယ်။
ဗလီဆိုတာ ရန်သူဘာသာခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ရှေ့တန်းအခြေစိုက်စခန်းပါပဲ။
ဒါကြောင့်မူဆလင်တွေ ဟာ ဗလီတွေကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ကိုးကွယ်ရုံသက်သက်ဆောက်တာ မဟုတ်ပဲ၊
ဗလီတွေကို များသထက်များအောင် မှိုလိုဆောက်ပါတယ်။
ဗလီတိုင်းကို ကြည့် ကြည့်ပါ။
ဗလီတိုင်း ဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာ ဒေသ တိုင်းမှာ ရန်သူတပ်စခန်းကို သိမ်းဖို့ ၀ိုင်းထားသလို ဆောက်ထားပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာ အခု ဗလီ ၁၆၀၀ ကျော်နေပါပြီ။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ဗလီထောင်ကျော်ဆောက်ပြီးပြီးဆိုတာ ဟာ
အဲဒီဘာသာခြားနိုင်ငံကို မူဆလင်တွေ သိမ်းပိုက်ဖို့ အခြစိုက်စခန်းတွေ ၁၀၀၀ ကျော် ( ရန်သူ့နယ်မြေထဲမှာ ) ဆောက်ထားတာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဗူးသီးတောင်၊ မောင်တောကို မူဆလင်တွေ ၀င်လာတယ်။
ဗလီတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ဆောက်တယ်။ ဘာဖြစ်သွားလဲ။
အချိန်တန်တော့ မူဆလင်အများစု၊ ဗလီတွေ ပြွတ်ခဲနေပြီး မူဆလင်နယ်မြေဖြစ်သွားတယ်။
မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အစ္စလာမ်ဗလီတွေ ထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီဆိုရင်တော့ အခြေအနေသိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး။
ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ ဘူးသီးတောင် ၊ မောင်တောကို ကြည့်ပါ။ မူဆလင်နယ်မြေလိုဖြစ်သွားပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗလီ ၂၇၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အချက်အချာ ကျတဲ့ မြို့ရွာဒေသတွေ အားလုံးရဲ့ အဓိက နေရာတွေ မှာ မူဆလင်တွေ ဗလီအလုံးပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော် ဖြန့်ကျက် ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။
ဆက်လက်ပြီး လည်း ဗလီတွေ ဆောက်နေဆဲပါ။
ဘာအတွက် ဆောက်နေကြတာလဲ။ ဘာကို ဦးတည်နေပါသလဲ။
ဘာအတွက် မူဆလင်တွေ အင်္ဂလန်မှာ ဗလီအလုံးပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်ဆောက်နေကြရတာလဲ။
အချိန်တန်တော့ မူဆလင်အများစု၊ ဗလီတွေ ပြွတ်ခဲနေပြီး မူဆလင်နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသ၊ ပြည်နယ်၊ ဖြစ်သွားတယ်။
ဘာအတွက် မူဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗလီအလုံးပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ဆောက်ထားရတာလဲ။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဗလီ အလုံးပေါင်း လေးထောင်လောက် ၊ ၄၀၀၀ လောက်၊ ဆောက်ပြီးသွားရင်ကော ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ။
မြန်မာပြည်ပေါက် မူဆလင်တွေ က ရပ်တန့်သွားမှာလား။
ဆက်လက် လှုပ်ရှားလာမဲ့ Step-2 ဟာ ဘာလဲ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အချက်အချာ ကျတဲ့ မြို့ရွာဒေသတွေ အားလုံးရဲ့ အဓိက နေရာတွေမှာ ရန်သူဘာသာခြားနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ရှေ့တန်းအခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်တဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ Command Center ဗလီအလုံးပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော် ဖြန့်ကျက် ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အချက်အချာနေရာတွေမှာ မူဆလင် Command Center ပေါင်း လေးထောင်လောက်ဆောက်ပြီး သွားတဲ့ အခါ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ။ :)
မယား ၄ယောက် ....လင်ကြီး ၁ ယောက် ( ရှယ်လုပ်ပြီး ) .....မူဆလင် ကလေး အယောက် ၂၀ ....နိုင်ငံတိုင်းကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းကြမယ်။
အစွန်းရောက်မူဆလင်များကို မြန်မာ့ " သွေး " မြန်မာ " ဇ " နှင့် ကောင်းကောင်း သမ နိုင်သော်လည်း
ငြိမ်းချမ်းသော မူဆလင်များဧ။် သားဖေါက်နှုန်းကို မြန်မာအမျိုးသမီးများ တွေ ယှဉ်မမွေးနိုင်ပါ။
အစွန်းရောက် မူဆလင်များကို အမေရိကန် စစ်အင်အား နှင့် သာသာယာယာ ဗျင်းနိုင်သော်လည်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းရှိ ငြိမ်းချမ်းသော မူဆလင်များဧ။် သားဖေါက်နှုန်းကို အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ တွေ ယှဉ်မမွေးနိုင်ပါ။
မူဆလင်များသည် အစ္စလာမ်ဇာတ်မသွင်းရသေးသော နိုင်ငံတိုင်းကို အပြင်စည်း ၊ အတွင်းစည်း စစ်မျက်နှာနှစ်ဘက် စုံတိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ အားလုံးသတိထားရမည်မှာ ( အတွင်းစည်း ) ငြိမ်းချမ်းသော မူဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက် လူဖေါက်နှုန်းသာဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ- ရိုဟင်ဂျာအယောင်ဆောင် ဘင်္ဂလီသားဖေါက်နှုန်းကို ကြည့်ပါ။
ဥရောပနေတိုးစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ အစည်းကြီး သည် အစွန်းရောက် မူဆလင်များကို စာမဖွဲ့လောက်သော်လည်း
နေတိုးစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့နိုင်ငံများမှ ငြိမ်းချမ်းသော မူဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက် လူဖေါက်နှုန်းကို ဥရောပတိုက်မှ အမျိုးသမီးများ ယှဉ်မမွေး နိုင်သောကြောင့် ......
အစွန်းရောက်မူဆလင်များဧ။် အသေခံဗုံးခွဲခြင်း ထက် အလယ်အလတ်မူဆလင်များ ဧ။် လူဦးရေဗုံးခွဲခြင်း
( မူဆလင်သားဖေါက်ခြင်း ၊ ငြိမ်းချမ်းသော ဗလီဆောက်လူဖေါက် မူဆလင်များ ) ကသာ ပိုမိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် မည်သည့် ဘာသာနိုင်ငံတော်ဘာသာဆိုသည်မှာ နိုင်ငံဧ။် လူဦးရေ အများစု က သာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်သာသနာကို အသက်ပင်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်လင့်ကစား ကလေးများများမွေးသော ပေါ်လစီ မကျင့်သုံးနိုင်ပါက
မိမိ နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ဘာသာကို နေရင်း၊ ထိုင်ရင်းနဲ့ကို မူဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက် လူဖေါက်နှုန်းအောက်တွင် လူနည်းစု ဘ၀ ကျရောက်သွားပါက ....
အပြင် က ဗြောင်လက်နက်ကိုင်တိုက်နေသာ အစွန်းရောက်မူဆလင်များထက်
နိုင်ငံတိုင်းကို ပြည်တွင်း က လှိုဏ်စားနေသော အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်များဧ။် မူဆလင်သားဖေါက်နှုန်းက အဓိက အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းသော အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက်လူဖေါက် ဂျီဟတ်သည် သာ အမှန်တကယ် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ဆေး မှီသေးတယ်။ ကံကောင်းတဲ့ အချက်က ကျနော်တို့ က Stage-2 မွတ်ဆလင်လူအများစု သွင်းနိုင်ရေး၊
မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀% ကျော်မြင့်တက်ရေးဆိ်ုတဲ့ ဒုတိယအဆင့်ဂျီဟတ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဆေး မှီသေးတယ်။ ဒါတောင်ရခိုင်ဒေသတစ်ချို့ပါသွားပြီ.
မြန်မာနိုင်ငံကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းတဲ့ ဒုတိယအဆင့် ဖြစ်တဲ့ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အဆမတန် တိုးပွားလာအောင်လုပ်နေတုန်း အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံ ထဲကို အဖက်ဖက်ကသွင်းနေတုန်း အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်
အခုမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ ဗလီတွေ ၂၇၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးသွားပြီ။
ဒုတိယ အဆင့်ဂျီဟတ် အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးသွားလို့
ဗလီတွေ ၄၊ ၅ ထောင် ဆောက်ပြီး သွားခဲ့ရင် ၊
ရန်ကုန်၊ မန်းလေးမြို့ကြီးတွေမှာ အခု စစ်တွေ၊ သံတွဲလို မွတ်ဆလင် ၆၀% ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုလေးတွေ အားလုံး သေဖို့သာပြင်ထားကြတော့ပဲ
အခုအချိန်က ဆေး မှီသေးတယ်။
မွတ်ဆလင် ၆၀% လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ အခါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်ကို လှန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အင်အား ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
မွတ်ဆလင် ၆၀ ၊ မြန်မာ ၄၀လေ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မွတ်ဆလင်ကို မြန်မာတွေ လှန်နိုင်ပါတော့မလဲ။
အခု ဘူးသီးတောင် မောင်တော မွတ်ဆလင် ၉၆% ၊ ရခိုင် ၄%
မွတ်ဆလင် ၉၆ယောက်၊ ရခိုင် ၄ယောက် ၊ ကဲ ဘယ်လိုပြန်ချ နိုင်ပါတော့မလဲ။
ထွက်ပြေးရုံက လွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ၉၆ ယောက် ၄ယောက်လေ။
အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်များဧ။် တာဝန်ဖြစ်တဲ့ ဗလီဆောက်လူဖေါက် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဆိုတာဒါပဲ။
မွတ်ဆလင် ၉၆ယောက်၊ မြန်မာ ၄ယောက် အချိန်ထိရောက်အောင် ထိုင်စောင့်မနေကြပါနဲ့ ။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသည် မွတ်ဆလင် အစ္စလမ်ရှရီးယားဥပဒေအောက်တွင် တိရစ္ဆာန်များသဖွယ်နေကြရမည်ဖြစ်သည်။
ယခု အင်ဒိုနီးရှား၊ အာဖဂန် ၊ ပါဂစ္စတန် တို့ တွင် မူလရှိခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယခု ဘယ်လိုနေ နေရသလဲကြည့်ပါ။
အီဂျစ်၊ အီရတ်၊ အီရန် တို့ တွင် မူလရှိခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန်များ ယခု မည်သို့ နေ နေရပါသလဲ ကြည့်ပါ၊
အဲဒီအတိုင်း မြန်မာလူမျိုးတွေ ဟာကိုယ့်မြေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်း မူဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက် လူဖေါက်နှုန်းအောက်တွင် အကြီးအကျယ်ကျဆုံးကာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပျောက် ၊
ဟိန္ဒူ ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာအားလုံး ဖျက်ဆီးခံရပြီး အစ္စလမ်ရှရီးယားဥပဒေအောက်တွင် တိရိစ္ဆာန်များသဖွယ်နေကြရမည်ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာ နဲ့တင်ပြီးသွားမည် မဟုတ်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာသည် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗျူဟာများစွာထဲမှ ဗျူဟာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်မျိုးနဲ့ မရရင် နောက်တစ်မျိုး အကွက်ဆင်လာကြပါအုန်းမယ်။ အခု OIC လာပြီလေ.
မြန်မာပြည်ဟာ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ လို နျုကလီးယားမပိုင်ပါဘူး။
စစ်အင်အား သန်းချီ မရှိပါဘူး။
ဒီကြားထဲမှာ လူဦးရေအနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ မြန်မာပြည်သူတွေ အချင်းချင်း ( မွတ်ဆလင်တွေ လိုလားသလို အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ) သတ်နေကြရင် ဘင်္ဂလီတွေ အကြိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ရှိရင်းစွဲမြန်မာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်လေးတွေ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ စစ်ရေး အဘက်ဘက် က ပြန်လည်အင်အားကောင်းလာအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
တစ်ဘက်ကလည်း ရခိုင်အပါအ၀င် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အားလုံး နိုင်ငံတော် ပေါ်လစီနဲ့ ကလေးများများမွေးပေးကြပါ။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စစ်စစ် လူဦးရေကို သန်း ၂၀၀ လောက် အထိဆွဲတင်နိုင်မှ မြန်မာနိုင်ငံမပျောက်ကွယ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း သန်း ၃၀လောက် ရှိသင့်ပါတယ်
အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်က မွတ်ဆလင်တွေက ကလေးတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သန်း၁၈၀ ကျော်နေချိန်မှာ
ရှိပြီးသား မြန်မာလူမျိုး စစ်စစ် ၅၆သန်းလေးကိုတောင် ကလေး မယူချင်ကြလို့သားကြောတွေ ဖြတ်ကြရင်တော့ မြန်မာလူမျိုး အနာဂတ်ကို စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။
ရှမ်းပြည်နယ်လောက်ရှိ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမွတ်ဆလင် က သန်း ၁၈၀ကျော် နေတဲ့ အချိန် မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ က ၅၆ သန်းဆိုတာ နောင်တစ်ချိန်ကိုယ့် သေတွင်းကိုယ်တူးနေတာနဲ့ အတူတူ ပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံချမ်းသာလာပြီး စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ စစ်ရေး အဘက်ဘက်က တောင့်တင်းခိုင်မာလာပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စစ်စစ် လူဦးရေသန်း ၂၀၀ လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ အချိန်အထိကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးအချင်းချင်း သည်းညည်းခံပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးကြပါ။
နောင်အနာဂတ်မြန်မာမျိုးနွယ်တိုင်းရင်းသား မျိုးဆက်သစ်အားလုံး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို ..
ကမ္ဘာ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး အယူဝါဒ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီ ဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီ-ဂျီဟတ် ရန် မှ မြန်မာနိုင်ငံကို
ရှေးရှေး က ဗုဒ္ဓဘာသာနောင်တော်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အာဖဂန်၊ ပါကစ္စတန် တို့လို ဖြစ်မသွားစေရန်အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ကြရပါမယ်။
မွတ်ဆလင်တွေဆိုတာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒအကျဉ်းထောင်ကြီးမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေပါပဲ။
အစ္စလာမ်အယူဝါဒဟာ အခြေခံ foundation မခိုင်တဲ့အပေါ်မှာ အမြင့်ကြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ မျှော်စင်ကြီးနဲ့ တူနေပါတယ်
အခြေမခိုင်တဲ့ ဟာကြီးကို အတင်း လုပ်ယူထားတော့ တစ်ချိန်ကျရင် အောက်ခြေက ပြိုတဲ့ အခါ လုံးဝပြိုကြသွားမှာပဲ
ဒါကြောင့် အစ္စလာမ်အယူဝါဒဟာ အထိမခံရွှေပန်းကန် ဖြစ်နေတာပါ။ ဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ ဝေဖန်သူတွေကို အသေသတ်တာပဲ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် ၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်မလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် လူတွေကို လည်လှီးသတ်ပြမလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် အသက် ၅၀ကျော်မှ မယား ၂၂ယောက်နဲ့ အငမ်းမရ မိတ်လိုက် နေမလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် အသက် ၅၀ကျော် သေခါနီး အချိန်မှာ မိန်းမ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး အလ္လာဟ် ဘုံမှာ အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ် လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက် နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရမယ်လို့ ပြောမလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် " သူနဲ့ လိင်မဆက်ဆံချင်ဘူး လို့ ငြင်းတဲ့ မိန်းမတွေ ဟာ ငရဲကျမယ် " လို့ ပြောပါ့မလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်ကို ငြိမ်းချမ်းမှုတွေယူဆောင်လာမှာလား။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သွေးညှီနံ့ တွေ ဖြစ်ပွားစေမလား။
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်က လူသားအချင်းချင်း မွတ်ဆလင်နဲ့ မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကိုသေကြေပျက်စီးအောင်သတ်ခိုင်းမလား။
မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကို လည်လှီးသတ်နိုင်ရင် အလ္လာဟ်ဘုံမှာ ၂၄နာရီလိင်တူလိင်ကွဲဆက်ဆံရမယ်လို့ မွတ်ဆလင်တွေကို မက်လုံးပေးထားမလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ... မွတ်ဆလင်တွေ
စဉ်းစားကြည့်ကြပါ မွတ်ဆလင်တွေ ၊
ခင်ဗျားတို့မွတ်ဆလင်တွေကိုယ်တိုင် အစ္စလာမ်အယူဝါဒအကျဉ်းထောင်ကြီးမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေပါပဲ။
ကုရ်အာန်ကျမ်းစာဖတ်ပြီး ခရစ်ယာန်တွေကို ပဲ အသေခံဗုံးခွဲရတော့မလိုလို၊
ကုရ်အာန်ကျမ်းစာဖတ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပဲ လည်လှီးသတ်ရတော့မလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ဘ၀တွေကို ပြန်မြင်ကြည့်ပါအုန်း။
ဒီကြားထဲ ဆွန်နီအစ္စလာမ် နဲ့ ရှီးယိုက်အစ္စလာမ် တို့ သူဦးသူသတ်၊ ကိုယ်ဦးကိုယ်သတ်၊
အဲဒီလို ခိုင်းစေထားတဲ့ ကုရ်အာန်အစ္စလာမ်အယူဝါဒအကျဉ်းထောင်ထဲ က နေ ရုန်းထွက်ကြည့်စမ်းပါ။
ကမ္ဘာကြီး ဟာ ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေဖြစ်စေချင်သလို၊ ကုရ်အာန်ကျမ်းက ခိုင်းထားသလို တစ်ခုတည်းသောအစ္စလမ်ကမ္ဘာ ဘယ်သောအခါမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မွတ်ဆလင်တွေ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်သောအခါမှ တစ်ခုတည်းသောအစ္စလမ်ကမ္ဘာဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခုတည်းသောအစ္စလမ်ကမ္ဘာ ဖြစ်လည်း ခင်ဗျားတို့ ဆွန်နီမွတ်ဆလင်၊ ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေ သတ်ကြရအုန်းမှာပဲ။
ဒီတော့ ငါတို့ ဘာလို့ သတ်နေကြတာလဲ။ ဘာလို့ သတ်ကြမှာလဲ ၊ ဘာလို့ အစ္စလမ်နယ်မြေတွေ များအောင်သိမ်းပိုက်ကြမှာလဲ။
ဟစ်တလာခိုင်းခိုင်း၊ အလ္လာဟ် ခိုင်းခိုင်း၊ မိုဟာမက်ခိုင်းခိုင်း၊ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
ဘာမဟုတ်တဲ့ အလ္လာဟ်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူ့ အသက်တွေကို မသတ်ချင်စမ်းပါနဲ့ ။
ဘာမဟုတ်တဲ့ အလ္လာဟ်အတွက် မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ လူသားတွေကို မုန်းတီးစက်ဆုပ်နေစရာလား။
System တစ်ခု ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို ခံစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ မွေးရာပါလူ့ အခွင့်အရေးပဲ။
လူသားအချင်းချင်း သတ်ခိုင်းတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအစ္စလာမ်အယူဝါဒ တွေကို မောင်းထုတ်ပြီး
အစ္စလာမ်အယူဝါဒအကျဉ်းသားမွတ်ဆလင်ဘ၀ကနေ လူပီသတဲ့လူသားစင်စစ်ဘ၀တွေကို ပြန်လည်ရယူကြည့်စမ်းပါ
လူသားအချင်းချင်း မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကို သတ်ခိုင်းပြီး ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကို အသေခံတပ်သားတွေလို ၊
မွတ်ဆလင်မိန်းမတွေကို ကြက် သားဖေါက်သလို အသုံးချနေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တုန့် ပြန်ပြီး
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ရန်သူဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒကို စွန့်ခွာနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ ၊
လူသားစင်စစ်ဘ၀ကို ပြန်ရယူနိုင်တဲ့ တစ်နေ့...
ကုရ်အာန်ကျမ်းက ရိုက်သွင်းထားတဲ့ အစ္စလာမ် Supremacy စိတ်ဓာတ်တွေ၊ အစ္စလာမ် Racist စိတ်ဓာတ်တွေ၊ အစ္စလာမ် Dominationစိတ်ဓာတ်တွေကို ဖျောက်ပစ်ပြီး
ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အလ္လာဟ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ 
ကုရ်အာန် အမိန့် ပေးမှုတွေကို အန်တုပြီး
အစ္စလာမ်အယူဝါဒအကျဉ်းသားမွတ်ဆလင်ဘ၀ကနေ လူသားစင်စစ်ဘ၀ကို ပြန်ရယူနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ 
ခင်ဗျားတို့ ကို လူပီသတဲ့ လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြန်လည်လက်ခံကြိုဆိုနေမှာပါ။
ဒါမှ မဟုတ်ပဲ ကုရ်အာန်ကျမ်းညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေကို ဆော်ဒီမွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ 
မွတ်ဆလင်တွေ ကို နိုင်ငံအသီးသီးကို ဖြန့် ကျက်ပြီးအလုံးအရင်းစေလွှတ်၊
မွတ်ဆလင်သားဖေါက်၊ ဗလီတွေ ထောင်ချီဆောက်၊
မွတ်ဆလင်လူနည်းနေရင် လျိုနေ Taqiyya ၊ မွတ်ဆလင်လူများလာရင် ဂျီဟတ်,
ဘာသာခြားဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုရန်စ ၊ လူမျိုးတုန်းသတ်၊
ဘာသာခြားဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ဘာသာတွေရေးနယ်မြေတွေကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်၊
ဒီလိုနည်းတွေ နဲ့ အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကို မွတ်ဆလင်တွေ သိမ်းပိုက်လာခဲ့သလို ပဲ
အခုလဲ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေကို ဒီလို အယုတ်တမာ ကုရ်အာန်နည်းလမ်းတွေ နဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေအုန်းမယ်ဆိုရင်တော့
အစ္စလမ်အယူဝါဒအကျဉ်းသားမွတ်ဆလင်တွေ ဘ၀ဟာ နိဂုံးကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
အလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာဆုံးတိုင်အောင် မွတ်ဆလင်တွေ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ အလ္လာဟ်ပေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တဲ့ " တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘာသာခြားလူတွေအားလုံး အလ္လာဟ်ကို မကိုးကွယ်မချင်း ဘာသာခြားတွေကို တိုက်ပစ်ရမယ် "
" တစ်ကမ္ဘာလုံးအစ္စလာမ်ဘာသာတစ်ခုတည်းသာ ကျန်တော့တဲ့ အထိရန်သူဘာသာခြားဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုအလုံးစုံချေမှုန်းပစ်ရမယ် " ဆိုတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေအသီးသီးကို မူဆလင်လူဖေါက်ဗလီဆောက်နည်းနဲ့ အစ္စလာမ်ဇတ်သွင်းဖို့ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့
" နောင်အခါ မွတ်ဆလင်နဲ့ ငါးကို ကြည့်ချင်ရင် အရုပ်ရေး ပြရလိမ့်မယ်" ဆိုတဲ့ တဘောင်ဟာ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပါကစ္စတန်၊အာဖဂန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား တွေကိ်ု ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ အစ္စလာမ်ဇတ်သွင်းပြီးပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားရာ အိန္ဒိယမဇ္ဈိမဒေသ မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ Annihilated လုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါစေတော့ ထားလိုက်တယ်။ မရဘူး။
အမျိုးမျိုး အစ္စလာမ်ဇတ်သွင်းဖို့ လုပ်နေတယ်။
အခုနောက်ဆုံး လက်ကျန် ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ကျန်တော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ၂ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း ချမ်းသာမပေးဘူး။ အမျိုးမျိုး အစ္စလာမ်ဇတ်သွင်းဖို့ လုပ်နေတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ထိုင်းတောင်ပိုင်းကနေထိုးဖေါက်တယ်၊ မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာ အနောက်ဖက် တံခါးက နေ ထိုးဖေါက်တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ ဗလီတွေ ထောင်နဲ့ ချီဆောက်တယ်၊
မွတ်ဆလင်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေ၊ ထိုင်းရေသောက်၊ ထိုင်းဆန်စားပြီး အိမ်ရှင်ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်တယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ၊ မြန်မာ့ရေသောက်၊ မြန်မာ့ဆန်စားပြီး အိမ်ရှင်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပါဂစ္စတန်၊အာဖဂန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ဖျက်ဆီးပြီး ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ အစ္စလာမ်ဇတ်သွင်းပြီးပြီ။
ဒါလည်း မွတ်ဆလင်တွေ အားမရသေးဘူး
အခုနောက်ဆုံး လက်ကျန် ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ကျန်တော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ၂ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင် အဘက်ဘက် က အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ နဲ့ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူး၊ ဆစ်၊ စတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှ ဘာသာတွေ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး ကမ္ဘာပေါ်က လူသားအားလုံးဟာ အစ္စလမ်အလ္လာဟ်ကို ကိုးကွယ်မှ ခင်ဗျားတို့အစ္စလာမ်ဇတ်သွင်းခြင်း ကရပ်တန့် မှာလား။
မိုဟာမက် လုပ်ခိုင်းတာမှန်သမျှဟာ အမှန်တရားပဲဆိုရင်တော့
မိုဟာမက်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာအလ္လာဟ် ဆီက လာတဲ့ ကမ္ဘာဖျက်မိစ္ဆာတမန်တော်မိုဟာမက်ပါပဲ။
၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ မိုဟာမက် ( အမြင့်မြတ်ဆုံးတမန်တော်)
ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကြိုက်သလို စိန်ခေါ်နိုင်တယ်။
( အသိဥာဏ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ၉နှစ်ကလေး က ၅၄နှစ်သေခါနီးကြီးမိုဟာမက်ကို နှစ်ဦးသဘောတူကြည်ဖြူခဲ့ပါတယ်လို့တော့ မဖြီးနဲ့ ပေါ့ဗျာ)
အသက် ၅၄နှစ် အရွယ် အဖိုးကြီး တစ်ယောက် နဲ့ ၉နှစ်ကလေးကို လိင်ဆက်ဆံတာကို မူဆလင်တွေ ကြည့်ကြည့်.. လူသားတိုင်း ကြည့်ကြည့်.....
အသက် ၅၄နှစ် အရွယ် အဖိုးကြီး တစ်ယောက် နဲ့ ၉နှစ်ကလေး လိင်ဆက်ဆံတဲ့ မြင်ကွင်းကို
မူဆလင်တွေ ကြည့်ကြည့်.. လူသားတိုင်း ကြည့်ကြည့်.....
လက်ခံနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလား ...လက်မခံနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလား..
. ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကြိုက်သလို စိန်ခေါ်နိုင်တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှ သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း...
အားလုံးသော လူသားတွေထဲမှာ...အမြင့်မြတ်ဆုံးလူ မိုဟာမက်က ဖြစ်ချင်တယ်
လက်တွေ့လုပ်တဲ့ အပြုအမူ ကျတော့ ၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့် ...
အသက် ၅၄နှစ် အရွယ် အဖိုးကြီး က ၉နှစ်ကလေး နဲ့ လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှ သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း... အားလုံးသော လူသားတွေထဲမှာ...အမြင့်မြတ်ဆုံးလူ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှ သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း...
အားလုံးသော လူသားတွေထဲမှာ...အမြင့်မြတ်ဆုံးလူ ဖြစ်ချင်ရင် ( အနည်းဆုံး..... အနည်းဆုံးတော့ ) ၉နှစ်သမီးကို လိင်ဆက်ဆံလို့ မရဘူး။
၉နှစ်သမီးကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့ တဲ့ မုဒိန်းကောင်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှ သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း... အားလုံးသော လူသားတွေထဲမှာ...အမြင့်မြတ်ဆုံးလူ ဖြစ်ချင်လို့ မရဘူး။
လက်တွေ့လုပ်တဲ့ အပြုအမူ ကျတော့ ၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့် ... အသက် ၅၄နှစ် အရွယ် အဖိုးကြီး က ၉နှစ်ကလေး လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။
၉နှစ်ကလေး ကို လည်း မုဒိန်းကျင့်တယ်။
ကျင့်ရင်းနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှ သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း... အားလုံးသော လူသားတွေထဲမှာ...အမြင့်မြတ်ဆုံးလူလို့လည်း မူဆလင်တွေ က သူတို့ ပထွေး မိုဟာမက်ကို တင်ပေးချင်တယ်။
ဘယ်လိုလုပ် ရမ လဲ.... ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။
၉နှစ်ကလေး ကို လည်း မုဒိန်းကျင့်၊ လူတွေကို လည်လှီးသတ်ပြီး မိုဟာမက်က အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားဖြစ်ချင်နေတယ်
မူဆလင်တွေ ရဲ့ ဘ၀ က ရှေ့ မှာ ဗြောင်လိမ်၊
နောက်မှာ က ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးဘယ်လိုမှ မူဆလင်တွေ မငြင်းနိုင်ဘူး။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို မူဆလင်တွေ က ဘာကြောင့် အသလွတ်မုန်းနေရတာလဲ။
အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် သေခါနီးအချိန်မှာတောင် သူ့မြေးလောက်ရှိတဲ့ ၉နှစ် ( ၃တန်းအရွယ်) ကလေးကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်တဲ့
လင်လုပ်သူကို သတ်ပြီး မယားဖြစ်သူကို မုဒိန်းမကျင့်ခဲ့တဲ့
ငယ်စဉ်အခါဆင်းဆင်းရဲရဲ အနှိမ်ခံကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ အတွက်...
အသက် ၂၅နှစ် သန်စွမ်းတဲ့ အရွယ်မှာ ( ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်အောင် )သူ့အမေလောက်ရှိတဲ့ အသက် ၄၀အရွယ်...ကလေး၂ယောက်ရှိတဲ့ ( လင် နှစ်ယောက် ရခဲ့ဖူးတဲ့ ) ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ မုဆိုးမ နှစ်ထပ်ကွမ်းကြီးကို မချစ်သော်လည်း၊ ဘ၀ ၀မ်းရေး၊ နောင်ရေး..စိတ်အေးရအောင် သိုက်တူးပြီး မယူခဲ့တဲ့
အဲဒီလို လူငယ်ဘ၀ ကို ..အဆုံးခံ စတေးခဲ့ရတဲ့အတွက်.. နာကျင်မှု၊ နာကျည်းမှုတွေကို စိတ်ထဲမှာ..တေးမှတ်ထားပြီး.. နောင်တစ်ချိန် သူအာဏာ ရချိန်မှာတော့ ချောပေ့၊ ငယ်ပေ့ ၊ နုပေ့ ဆိုတဲ့ သူများသားသမီး၊ သူများမယားတွေ ကို အတိုးချပြီး မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်တဲ့
အာဏာရပြီးချိန်မှာ လူတွေ ကို လည်လှီးသတ်လိုက် ၊ ..မယား၂၂ယောက်နဲ့ တစ်လှည့်စီ အိပ်လိုက် မလုပ်ခဲ့တဲ့
တစ် ခါတစ်လေ မိန်းမ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး မိန်းမကြီးလိုနေလိုက် လုပ်ခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်တဲ့
( သိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ )
" သူနဲ့ လိင်မဆက်ဆံချင်ဘူးလို့ ငြင်းတဲ့ မိန်းမဟာ ငရဲကျမယ် " လို့ မဟောခဲ့တဲ့
သေခါနီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာ မယားအငယ်ဆုံးလေးကို ချိုချို စို့ရင်း အသက်ထွက်သွားတာ မဟုတ်တဲ့
သူတစ်ပါးအသက်တွေကို သတ်ဖို့ မညွှန်ကြားခဲ့တဲ့
ကိုယ့်လက်ကို သွေးမစွန်းခဲ့သလို သူကို့ ကိုးကွယ်တဲ့သူမှန်သမျှကို သူ့တရားတော်ကြောင့်သွေးမစွန်းစေခဲ့တဲ့
မိန်းမတွေကို ( သူများကြာခိုမှာစိုးလို့) အိမ်တွင်းပုန်းခိုင်းတဲ့သူမဟုတ်တဲ့
သူ့ကို မယုံကြည်တဲ့သူတွေကို မသတ်ခိုင်းတဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေရဲ့ အသက်ကို သတ်နိုင်ရင် နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့ မဟောခဲ့တဲ့
ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ့်ဘာသာလွှမ်းမိုးအောင် ၊ စိုးမိုးအောင်လုပ်ရမယ်လို့ မဟောခဲ့တဲ့
ကိုယ့်ဘာသာက လွဲရင် ကျန်တဲ့ ဘာသာအားလုံးကို အလုံးစုံဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ မဟောခဲ့တဲ့
လူသားအချင်းချင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူရန်သူများဆိုပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကို နှစ်ပိုင်းခွဲ မသတ်ခိုင်းတဲ့
သူများ ဘာသာက မိန်းမပျိုတွေ ကို ရသလောက်ယူခိုင်းပြီး သူများ ဘာသာမျိုးဆက် ပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ မဟောခဲ့တဲ့
ကိုယ့်ဘာသာက မိန်းမပျိုတွေ ကို တော့ သူများ ဘာသာနဲ့ ယူပြီး ဘာသာခြားမျိုးဆက် မွေးမယ်ဆိုရင် အသေသတ်ပစ်ဖို့ မဟောခဲ့တဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေကို ရန်သူတွေဆိုပြီး မုန်းဖို့ မဟောခဲ့တဲ့
ယောက်ျားတစ်ယောက် ကို မိန်းမလေးယောက်ယူ.. သားဖေါက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို လူဦးရေအရေအတွက် နဲ့လွှမ်းမိုးဖို့ အမိန့်မပေးခဲ့တဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေကို သတ်နိုင်ရင် နတ်ပြည်မှာ အပျိုစင် ၇၂ယောက်၊ လူပျိုပေါက် ကောင်လေး ၂၈ ယောက်နဲ့ ကာမဂုဏ် စံစားရမယ်လို့ မဟောခဲ့တဲ့.....
မွတ်ဆလင်တွေ ဦးဏှောက်ထဲကို Installed အလုပ်ခံထားရတဲ့ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံအသီးသီး က ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့ စတဲ့လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး အပေါ် အမုန်းတရားတွေ၊
ကုရ်အာန်ကျမ်းညွှန်ကြားချက်အရသူတပါးဘာသာတွေကို ရရင် ရသလို ဖျက်ဆီးပစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ၊
ကုရ်အာန်ကျမ်းညွှန်ကြားချက်အရသူများဘာသာတွေ အပေါ် လူပါးဝချင်တဲ့စိတ်တွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေ၊
သွေးဆာရန်လိုရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းကြောင့် ပဲပေါ့ ။
ဤကမ္ဘာပေါ်က လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကို ဖျက်ဆီးခဲ့၊ဖျက်ဆီးဆဲ၊ ဖျက်ဆီးမဲ့ အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ ရဲ့ ကျဆုံးခန်းဟာ မဝေးတော့မဲ့ အနာဂတ်တစ်နေ့မှာ နီးကပ်လို့လာနေပါပြီ။